Rosia: Fihetsiketsehan’ny Mpanohitra Tao Saint-Pétersbourg · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2017 2:38 GMT
Nisy fihetsiketsehan'ny mpanohitra goavana nitranga tao St. Pétersbourg ny Asabotsy (Feb-Mar 2007) teo: olona an'arivony maro, antitra sy tanora (nisy mihitsy aza ny sasany tonga niaraka tamin'ny zanany) , nandrava ny sakan'ny polisy ary nanavatsava ny lalamben'i Nevskiy Prospekt; Olona am-polony no naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny polisy misahana ny rotaka, ary am-polony no nosamborina. Niresaka tamin'ny vahoaka ireo mpitarika mpanohitra miisa roa – Garry Kasparov sy Mikhail Kasyanov fa ilay fahatelo Eduard Limonov avy ao amin'ny Antoko Bolsevika Nasionaly kosa nosamborina talohan'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana. Naneho ny endrika roa soson'ny hetsi-panoherana ny sasany tamin'ireo teny filamatry ny fihetsiketsehana toy ny hoe ” Rosia Tsy mila Putin” sy ny hoe “Tanànanay Ity”: araka izay nolazain'i Atoa Kasyanov hoe: “tsy olana federaly fotsiny no atrehin'ny mponina ao Saint-Pétersbourg fa maro ihany koa ireo olana mifandraika mivantana amin'ny fiainana ao an-tanàndehibe.” Niantso ny famoriam-bahoaka ho “fihantsiana” ny governoran'i St. Petersbourg Valentina Matviyenko ary nilaza izy fa niaraka tamin'ireo tanora mpanao fihetsiketsehana ekstremista miisa 120 avy any Moskoa ny mpikarakara izany . “
Indreto ny fanehoan-kevitra sasany tamin'ireo nosoratan'ny mpisera LJ aneta_spb (mpanao gazety ao Saint-Pétersbourg avy any Belarosia) momba ilay famoriam-bahoaka:
Nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra hafa avy amin'i aneta_spb tao amin'ny lahatsoratra hafa :
Nandefa ny sarin'ny famoriam-bahoaka (maro tamin'izany no nanjavozavo satria nalaina teny am-pitsoahana) ilay mpisera LJ shavu, mpanao gazety hafa ao Saint-Pétersbourg. Ahitana fizarana valo izany ary indro ny lohatenin'ny voalohany :